| | ၂၀၀၈ ခုနှစ် ထိုင်းရေပိုင်နက်အတွင်း အဖမ်းခံထားရတဲ့ လှေစီး မွတ်ဆလင်များ
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်ရှိသူများ နယ်စပ်ပြဿနာများ အတွက် တွေ့ဆုံမည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် အရာရှိ ပျောက်ဆုံးမှု ဖြေရှင်းရန် မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုထိုင်းက ဘင်္ဂါလီ တထောင်ကျော် မြန်မာသို့ ပြန်ပို့သည့် ဖြစ်ရပ် မရှိဟု သမ္မတရုံး ငြင်းဆိုငပုတောတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူများ ဖမ်းဆီးရမိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေး
mg pyu November 30, 2012 - 8:34 pm မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိပါ။
Reply Maung Maung December 1, 2012 - 6:43 am Why Nasaka force can not protect the border?
Reply Ko Ko December 1, 2012 - 11:52 am They are collecting illegal money from Bangali who want to get citizenship of Myanmar and to go inside Myanmar.
Reply Maung Myo December 4, 2012 - 12:41 pm The diesel selling of Navy ships is also notorious
Reply K.J December 4, 2012 - 5:05 pm မွတ်ဆလင် လူမျိုးဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်နော်။ မွတ်ဆလင် ဆိုတာ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လှေစီး မွတ်ဆလင်များလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါသလဲ။ ပုံမှာလည်း မွတ်ဆလင်လို့ပဲ စာတန်းထိုးတာ တွေ့နေရတယ်။
Reply M.J January 8, 2013 - 9:40 pm ကိုယ့်လူမှားနေပြီ။ အစ္စလာမ် ဆိုတာကမှကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာ။ အဲဒီတော့ မူဆလင်လူမျိုး ဆိုတာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။